DREN Amoron=E2=80=99I Mania : 19968 hiatrika ny fanadinana CEPE
Hilamina ny fiatrehana ny fanadinana CEPE ato amin’ny DREN na ny f=ari-piadidiam-pampianarana Amoron’i Mania amin’ny 14 Aogositra =izao hoy ny nambaran’Andriamatoa RAVELONALOHOTSY RANDRIANASOLO Charle=s, talem-paritry ny fanabeazam-pirenena Amoron’i Mania. Efa miparitak=a any amin’ny distrika 4 mandrafitra ny faritra ny laza adina, na ire=o toerana farany alavitra aza dia efa nahazo izany toa ny any Mangataboahan=gy, Mandrosonoro sy Amborompotsy izay Kaominina ao amin’ny distrika A=mbatofinandrahana. Fa noho ny tsy fandriampahalemana ao amin’ny distr=ika Manandriana dia nisy ny lamina mikasika ny fanapariahana ny laza adina =ka ity faran’ny herinadro ity vao ho zaraina isaky kaominina izany.
Vonona arak’izany ihany koa ny efitrano hanantanterahana ny fanadi=nana izay miisa 497, mitsinjara hoan’ny distrika 4 dia i Manandriana,= Fandrina, Ambositra ary Ambatofinandrahana. Miisa 19968 kosa ny hiatrika i=zany :
Ambositra : 7112
Fandriana : 6401
Manandriana : 2626
Ambatofinandrahana : 3529
Fa efa nahazo ny fiantsoana avy tamin’ny fanjakana ihany koa ireo =mpampianatra mpanadina rehetra hiandraikitra amin’ny fanarahamaso ny =fanadinana hoy hatrany ny nambaran’ny DREN AMM ary hiezaka mafy izy i=reo amin’ny fanantontosaina ny fanadinana.
Vonona torak’izany ihany koa hoy izy hatrany ny eo anivon’ny= Prefektioran’Ambositra amin’ny fitandroana ny filaminana mandr=itra ny fanantontosana fanadinana.
Nanafatra ihany koa ny tenany hoan’ireo mpianatra mba tsy hanana t=ebiteby fa hitony ary hisikiponitra tsara amin’ny fiatrehana ny fanad=inana .
Tsy handray anjara ny Sendikaly
Hatreto anefa dia olana mbola tsy voavahan’ny fanjakana malagasy h=atrany ny famaliana ny fitakian’ireo mpampianatra, ohatra amin’=izany ny hampiakarana ny karaman’izy ireo izay tena ambany tokoa raha= mihoatra amin’ny Sendika hafa.
Manoloana izany dia nanao fanambarana toy izao ireo Sendikalin’ny =mpampianatra manerana ny Nosy ka anisan’izany ny eto Amoron’i M=ania, ny faha-03 Aogositra 2018 lasa teo :
1-Tsy nahafa-po anay ary tsy nifanarahana ny vahaolana naroson’=;ny fanjakana mikasika ny fitakiana izay nataonay nandritry ny telo volana =mahery ;
2-Hitanay fa tsy nifanaraka amin’ny fahalalana sahaza hoenti-m=iatrika ny fannadinana ny fahalalàna azon’ireo ankizy amin&rsq=uo;ny sekolim-panjakana noho ny fahatapahan’ny fianarana nandritra ny= telo volana mahery ;
3-Hitanay fa atao amboletra ny fanatontosana ny fanadinam-panjakana =ary notsinontsinoavina ny fanagatahan’ireo mpianatra any amin’n=y sekolim-panjakana maniry ny hanemorana ny datim-panadinana hisorohana ny =elanelana eo amin’izy ireo sy ny mpianatry ny sekoly tsy miankina&nbs=p;;
Ka noho izany hoy izy ireo dia:
« Mbola mitohy ny tolona ary tsy handray anjara amin’ir=eo fanadinam-panjakana atao amboletra izahay mpanabe izay manao izao fanamb=arana izao ary tomponandraikitra isika Ray amandrenin’ny mpianatra am=in’ny fandefasantsika na hanao na tsy hanao ny fanadianam-panjakana&n=bsp;»
Nomarihin’izy ireo ihany koa fa « tsy tompon’andr=aikitra amin’ny voka-panadinana sy izay hitranga mialoha sy mandritra= ary aorin’ny fanantanterahana ny fanadinam-panjakana amboletra izy i=reo »
Samy nanao sonia tamin’ity taratasy ity avokoa moa ny filoha natio=naly sy ny solotenan’ny faritra 22 manerana ny Nosy.
Tsy ny fanadinana CEPE ihany no voakasik’izao fanambarana izao fa =ny fanadinana ara-panjakana rehetra amin’ity taona 2018 ity.